Caymiska Caafimaadka ee USA | khayraadka Health ka USAHello | USAHello
Going to dhakhtarkaaga ama isbitaalka lacag badan ku kici kara ee USA. Tani waa sababta ay muhiim ah in ay kaar caafimaad. Baro oo ku saabsan noocyada kala duwan ee caymiska caafimaadka iyo sida aad u heli kartid caymiska caafimaadka.
caymiska caafimaadka, ama ceymiska caafimaadka, waa qadar lacag ah ee aad bixiso bil kasta si ay shirkadda caymiska. Qiimaha billaha ah ee caymiska waxaa loo yaqaan lacagta.
Daryeelka Caafimaadka ee dadka ajnabiga ah ma aha mid aad uga duwan caafimaadka dhashay Maraykanka, laakiin mararka qaarkood waxay noqon kartaa wareer. Habka ugu fudud si ay u sharaxdo waa in marka aad leedahay kharashka caafimaadka, shirkadda caymiska ka caawisaa u oofin. daawo degdeg ah ama qaliin ku kici kara kumanyaalka kun ee doolar. Waxaa fiican in aad bixiso lacagta bil kasta ka badan si lama filaan ah biil aad u wayn oo ka isbitaalka ka heli. Guud, daryeelka caafimaadka ee muhaajiriinta iyo qaxootiga waa la mid tahay sida dhashay Maraykanka. The kala duwan ee caymiska caafimaadka waxay ku salaysan yihiin da'da, shaqada, wax dhibaato caafimaad ee aad hadda leedahay, iyo inta lacag ee aad ka dhigi.
Sidee baan u heli caymiska caafimaadka?
In Maraykanka, Waad awoodaa:
is daboolay iyada oo dawladda (caafimaadka dadweynaha) barnaamijyada caymiska, ama
aad u hesho caymiska aad shaqo iyada oo gacan laga cidda aad u shaqayso, ama
iibsadaan caymiska caafimaadka naftaada.
Ahaanshaha daboolay waa isku mid sida isagoo caymis. Waxay labada macnaheedu aad ilaaliyo inay bixiso biilasha caafimaadka waaweyn.
barnaamijka caymiska caafimaadka ee dowladda
aad xaq u leedahay?
Ahaanshaha xaq u wax ka dhigan tahay waxaad ka heli kartaa wax ama u qalanto wax. Dowladda ayaa go'aan ka gaari doona haddii aad adiga iyo qoyskaaga ay xaq u leeyihiin barnaamijyada dowladda. Si aad u go'aansato haddii aad xaq u leedahay, waxay eegaan inta lacag ee aad ka dhigi, tirada carruurta aad leedahay, iyo inta ay da'daadu tahay. Daryeelka Caafimaadka ee soo galootiga iyo qaxootiga waxaa laga yaabaa in qiimo jaban ama bilaash ah, tan iyo markii laga yaabaa in aanad samaynta lacag badan marka hore.
Medicaid waa barnaamij caymiska ee caafimaadka dadweynaha ay maamusho gobolka aad ku nooshahay. Barnaamijku wuxuu siiyaa caawimaad si shaqsiyaadka iyo qoysaska in ay yihiin dakhligoodu hooseeyo ama curyaan ah. Qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga heli doonaa Medicaid marka u horaysa ee yimaadaan ee dalka Mareykanka. Shuruudaha xaq u yeelashada kala duwan ee gobolka.
Medicare waa barnaamij caymiska ee caafimaadka dadweynaha ay maamusho dawladda Maraykanka. Medicare waxaa laga heli karaa dhammaan dadka waaweyn ee da'da 65 iyo wixii ka weyn iyo in muwaadiniinta naafada ah oo da 'walba. Medicare waxay bixisaa qorshe lagu caawiyo kharashka daawada. badan oo ku saabsan Medicare Baro.
Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP) bixisa daryeelka caafimaadka oo hooseeya- qoysaska dakhliga-dhexe leh carruurta yar yar. CHIP waa barnaamij wanaagsan maxaa yeelay waxa ay bixisaa ballamaha dhakhtarka carruurta iyo daryeelka caafimaadka. Waxaa muhiim ah in qoysaska qaxootiga in ay carruurtooda geeyaan dhakhtar ee sannad walba baaritaan iyo tallaalada. Raadi barnaamijka CHIP gobolkaaga.
Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC) waa xaalad-by-state ah barnaamij caafimaad oo si gaar ah waxay ka caawisaa caruurta da'doodu ka yar tahay shan sano jir maamula, haweenka uurka leh, iyo hooyooyinka naasnuujinta. Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa nafaqada, sahayda cuntada, iyo wanaajinta helitaanka daryeel caafimaad iyo adeegyada daryeelka bulshada.
Haddii aad tahay dakhligoodu hooseeyo iyo ilmo, tani waa barnaamij wanaagsan. Baro wax badan oo ku saabsan WIC oo raadi gobolka ee barnaamijka WIC.
caymiska caafimaadka gaarka ah
Dad badan oo Maraykan leeyihiin caymiska caafimaadka gaarka ah iyo ha isticmaalin barnaamijyada caymiska caafimaadka dadweynaha. Tani waa sababta oo shirkadaha inta badan lagu bixiyo caymiska caafimaadka gaarka ah ee shaqaalaha ay.
caymiska caafimaadka goobta shaqada
Marka aad eegto shaqo, waa in aad isku daydo in shaqo bixiya caymiska caafimaadka ka heli. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad qoyska. Loo shaqeeyaha ayaa bixinaya inta badan kharashka iyo qofka shaqaalaha ah waxay bixisaa qadar yar. Waayo lacag dheeraad ah, shaqaalaha caadiga ah waxay dooran karaan in ay ninkaaga ama xaaskaaga iyo carruur kasta oo ay leeyihiin qorshe la mid ah waxaa ka mid ah caymiska.
Haddii aad shaqo ka tago, waxaa laguu oggolaan karaa in aad haysato caymiska aad in muddo ah, iyada oo COBRA ah qorshaha dawladda u yeedhay. COBRA tahay oo keliya muddo gaaban, oo laga yaabaa in aad iska bixisaa lacagta oo dhan, laakiin wuu hayn doonaa kugu daboolay dhexeeya shaqo..
Bixinta caymiska oo aan loo-shaqeeye
Haddii aadan haysan shaqo-bixiya caymiska caafimaadka, iyo haddii aadan u qalmin barnaamijka dawladda, waxaad yeelan doontaa in ay soo iibsato caymiska caafimaadka gaarka ah. Tani waxay noqon kartaa qaali. Waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay caawimo lacagta aad dhex Act Affordable Care.
Act Affordable Care
Act Affordable Care (ACA), sidoo kale loo yaqaan “ObamaCare,” wuxuu u baahan yahay ugu muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka sharci u leedahay caymiska caafimaadka. Laakiin waxaa kale oo kuu ogolaanaya in aad iibsato caymiska caafimaadka kharashka hoose iyadoo la kaashanayo dowladda. Eeg haddii aad awoodid aad u hesho caymiska hoos Act Affordable Care.
qorsheyaasha caymiska caafimaadka College
Ardayda inta badan ay awoodaan in ay iibsadaan caymiska daryeelka caafimaadka iyada oo kulliyadaha ay. Si aad xaq ugu yeelato waa inaad la qoro in tiro cayiman oo credits.